ဆုတ်ခွာခြင်းကအီစနောလ် - သွေးဆောင် locomotor sensitization အားခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့်ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်များတွင် FosB / osFosB ဖော်ပြမှု၏ကွဲပြားသောပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - Your Brain On Porn
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2014 ဖေဖော်ဝါရီ; 117: 70-8 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2013.12.007 ။ EPub 2013 ဒီဇင်ဘာ 16 ။
de Pauli RF1, Coelhoso CC ကို2, Tesone-Coelho ကို C2, Linardi တစ်ဦးက3, Mello LE2, Silveira DX1, ဆန်းတို့စ-အငယ်တန်း JG4.
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာ functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်ဖော်ပြအာရုံခံ plasticity သွေးဆောင်။ ဒါဟာကောင်းစွာ limbic စနစ်တွင်အာရုံခံ plasticity relapse ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ compulsive ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမြဲမြံစွာတည်သည်။ FosB / DeltaFosB စကားရပ်ထဲမှာတိုးမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အာရုံခံ plasticity ၏အရေးအပါဆုံးပုံစံများကိုတစ်ဦးဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း, ကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ plasticity ကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်သားဖွယ်အရေးပါမှု၏မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားမှုဟာအီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းပါရာဒိုင်းနှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများအစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ထိခိုက်ခြင်းနှင့် Non-sensitized ကြွက် FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြားခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်နေ့စဉ် 21days များအတွက်အီသနောသို့မဟုတ်ဆားနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ ဝယ်ယူအဆင့်အတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှု၏အဆိုအရသူတို့ထိခိုက် (EtOH_High) သို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့-sensitive (EtOH_Low) အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ 18h သို့မဟုတ် 5days ပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဦးနှောက် FosB / DeltaFosB immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ ဆုတ်ခွာ၏ 5th နေ့ရက်တွင်, ငါတို့ (ထိုမော်တာ cortex အတွက်), အ EtOH_Low အုပ်စုတွင် (ထို ventral tegmental ဧရိယာ၌) နှင့် (အ striatum အတွက်) နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက် EtOH_High အုပ်စုတွင်တိုးမြှင့် FosB / DeltaFosB စကားရပ်ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျတယျ။ ကွာခြားချက်များအဆိုပါ EtOH_Low အုပ်စုပိုပြီးတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့်, အီသနော-သွေးဆောင် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူအဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆုတ်ခွာကာလအတွင်း differential ကိုအာရုံခံ plasticity ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် Non-sensitized ကြွက်များတွင်တွေ့ရှိ FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများဆုတ်ခွာကာလထက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုပိုမိုဆက်စပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတ်ခွာကာလအတွင်း FosB / DeltaFosB စကားရပ်ထဲမှာတိုး functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒနှစ်ဦးစလုံး plasticity ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။
DeltaFosB စကားရပ်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အာရုံခံ plasticity ၏အရေးပါသောပုံစံဖြစ်ပါသည်
သို့ရာတွင်ထိုသို့ functional ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ plasticity ကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ထိခိုက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်တဲ့-sensitive ကြွက်တို့တွင်အ DeltaFosB အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဤအပြောင်းအလဲများကိုနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ရောဂါဗေဒ plasticity ကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်လက်ရှိ neurobiological သုတေသန၏စိန်ခေါ်မှုမူးယစ်ဆေးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေကျော်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုအပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းဖျန်ဖြေသောအာရုံခံ plasticity ယန္တရားများကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ "စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း" ဟုခေါ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အရေးအပါဆုံးသီအိုရီတစ်ခုမှာ, compulsive (အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သော) မှ Impulse (အပြုသဘောအားကောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော) မှတစ်တိုးတက်မှုလည်းမရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ (အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, Bing မူးယစ်နှင့်ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်: ဒီတိုးတက်မှုတစ်ခုပြိုကျသံသရာအတွက်အောက်ပါပြည်နယ်များပါဝင်သည်Koob နှင့် Le Moal, 2005, Koob နှင့် Le Moal, 2008 နှင့် Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ပေါ်မှာဤမြင်ကွင်းကနေမူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာမှုများစူးရှခြင်းနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးစလုံး abstinence ကနေပေါ်ထွက်လာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များနှင့် ပတ်သက်. neurobiological ယန္တရားများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ "စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း" ၏သီအိုရီအရ, ဆုလာဘ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းအာရုံကြောဆားကစ်အတွက်ရေရှည်နှင့်ဇွဲ plasticity အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပုံရသည်။ သို့သော်ဤ plasticity ပွောငျးလဲမူးယစ်ဆေးဖို့ access ကိုတားဆီးသောအခါပေါ်ထွက်လာတဲ့အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဤသည်ယန္တရား (၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့, စွဲလမ်း၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်ခိုင်မာသောစိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်Koob နှင့် Le Moal, 2005 နှင့် Koob နှင့် Le Moal, 2008).
Locomotor ာင်းသူတို့ရဲ့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့လျှောက်မူးယစ်ဆေးဝါးပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုအပေါ်တိုးမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်လှုံ့ဆော် locomotor သက်ရောက်မှု (အတွင်းတိုးဆင်တူဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံပြီးအသုံးဝင်သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000 နှင့် Vanderschuren နှင့်ပီယပ်, 2010) ။ locomotor ာင်းမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြားအပြုအမူတွေတူတဲ့ပါဘူးဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ယာယီ morphological နှင့် neurochemical features တွေမူးယစ်ဆေးစွဲသူ့ဟာသူ (ရန်အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းကိုဦးဆောင်သူတို့နှင့်အတူအပြိုင်၌ရှိကြ၏Robinson နဲ့ Kolb, 1999, Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000 နှင့် Vanderschuren နှင့်ပီယပ်, 2010) ။ ဝယ်ယူ (ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု), ဆုတ်ခွာကာလများနှင့်စိန်ခေါ်မှု (ရုပ်သိမ်းရေးကာလပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတစ်ဦးအဆက်အသွယ်သစ်): အစဉ်အလာ, locomotor ာင်း protocol ကိုအဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ locomotor ာင်းသုံးပြီးလေ့လာမှုများအများစုဆုတ်ခွာကာလထပ်ကိုသာရှာမှီးခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုအဆင့်တွင်အာရုံစူးစိုက်။
ဒါဟာကောင်းစွာ (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်မြဲမြံစွာတည်နေသည်Perrotti et al ။ , 2008) နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (Perrotti et al ။ , 2004) ကို corticolimbic system ထဲမှာကူးယူအချက် fosB / deltafosB ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွားစေပါသည်။ ဤအဒေသများတွင် FosB / DeltaFosB စုဆောင်းခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ခံနိုင်ရည်အတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆထားပြီး (Berton et al ။ , 2007 နှင့် Vialou et al ။ , 2010) နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက် (Harris က et al ။ , 2007 နှင့် et al Muschamp ။ , 2012), အီသနော (Kaste et al ။ , 2009 နှင့် လီ et al ။ , 2010), နှင့် opioids (Zachary et al ။ , 2006 နှင့် Solecki et al ။ , 2008) ။ ဒါကြောင့် FosB / DeltaFosB သည့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor sensitive ကအဖြစ်, locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူအဆင့် ensues သောရုပ်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်. အာရုံခံ plasticity ဖြစ်ရပ်များအချို့ modulates တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါဟာ (မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်Flagel et al ။ , 2009, ဂျော့ခ်ျနဲ့ Koob, 2010 နှင့် Swendsen နှင့် Le Moal, 2011) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ DBA /2J ကြွက်များသည် C57BL /6J ထက်အီသနောဖြင့်သွေးဆောင်ရသောစက်ခေါင်းအာရုံခံကိရိယာကိုတုံ့ပြန်ရန်ပိုမိုကျရောက်Phillips က et al ။ , 1997 နှင့် ဖရဲသီးနှင့် Boehm, 2011a) ။ outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်များတွင်အီသနောသွေးဆောင် locomotor ာင်းနှင့် ပတ်သက်. မူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သည် Masur နှင့် dos Santos (1988)။ ထို့နောက် မှစ. အခြားသောလေ့လာမှုများ (အီသနော-သွေးဆောင် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူအတွက်အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသော neurochemical features တွေသရုပ်ပြပါပြီSouza-Formigoni et al ။ , 1999, Abrahão et al ။ , 2011, Abrahão et al ။ , 2012, Quadro et al ။ , 2002a နှင့် Quadro et al ။ , 2002b) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူအဆင့်အပြီးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းအမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ လတ်တလောလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဆုတ်ခွာတစ်လျှောက်လုံး cannabinoid အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (CB1R) ၏စကားရပ်နှင့် ပတ်သက်. ထိခိုက်ခြင်းနှင့် Non-sensitized outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြောင်းလေ့လာမှု, (မဟုတ်သောထိခိုက်ကြွက်ပေမယ့်မဟုတ်) sensitized ခုနှစ်တွင် (က, prefrontal cortex အတွက် ventral tegmental ဧရိယာ, amygdala, striatum နှင့် hippocampus CB1R စကားရပ်တိုးပွားလာခဲ့သည်Coelhoso et al ။ , 2013).
အီသနော - သွေးဆောင် locomotor sensitization နှင့်ပတ်သက်။ outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်များတွင်ကောင်းစွာထူထောင်အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေးသော, ဤအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနောက်ဆက်တွဲဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းကွဲပြားအာရုံကြောဓာတုအင်္ဂါရပ်များဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းပေးထား, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု sensitized နှင့် non- sensitized ကြွက်များတွင် FosB / DeltaFosB ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးစုံစမ်းစစ်ဆေး (၁၈ ဇ) နှင့် ၅ ရက်ကြာဆုတ်ခွာပြီးနောက်။
2 ။ ပစ္စည်းနှင့်နည်းစနစ်များ
2.1 ။ ဘာသာရပ်များ
မူလက Universidade Federal de São Paulo ရှိတိဗက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာမှ Albino Swiss Webster လိုင်းမှဆင်းသက်လာအမျိုးသားပေါက်ဖွားဆွစ် Webster ကြွက် (EPM-1 Colony, São Paulo, SP, Brazil,) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ။ စမ်းသပ်မှုစတင်ချိန်တွင်ကြွက်များသည်အသက် ၁၂ ပတ် (၃၀ မှ ၄၀ ဂရမ်) ရှိကြသည်။ ကြွက် ၁၀ ကောင်အုပ်စုများကို ၄၀ × ၃၄ × ၁၇ စင်တီမီတာရှိသောသစ်သားခေါက်အိပ်ယာများဖြင့်အိတ်များ၌ထားရှိသည်။ အပူချိန် (၂၀ မှ ၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်စိုထိုင်းဆ (၅၀%) ထိန်းချုပ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်ကိုလိုနီများကိုအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (၁၂/၁၂ နာရီ) တွင်၊ မွန်းလွဲ ၇း၀၀ နာရီတွင်မီးများ၊ မောက်စ်လုံးလုံးနှင့်ရေပိုက်ခေါင်းနှင့်တွဲထားသည်။ စမ်းသပ်ကာလအတွင်းမှလွဲ။ libitum ။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများမစတင်မီကြွက်များကိုဤအိမ်ရာအခြေအနေတွင်အနည်းဆုံး ၇ ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် (protocol နံပါတ် - ၂၀၄၃/၀၉)၊ တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများအတွက် EU ညွှန်ကြားချက် ၂၀၁၀ / ၆၃ / အီးယူအရhttp://ec.europa.eu/environmental/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm).
2.2 ။ Locomotor ာင်း
locomotor အကဲဆတ်ခြင်း protocol ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်း (ထံမှယခင်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ်Coelhoso et al ။ , 2013) ။ ပရိုတိုကော၏အစတွင်တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကို intraperitoneally (ip) ကိုဆားဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီး ၄ င်းအားအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုအကွက် (Insight, Brazil) တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်စမ်းသပ်ပြီးအခြေခံအားရွေ့လျားမှုကိုတည်ဆောက်သည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုနေ့စဉ်အီသနော (၂ ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ၀.၀၅% NaCl% NaCl၊ အိုင် - EtOH အုပ်စု) ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့သည်။ N = 40) သို့မဟုတ်ဆား (အလားတူအသံအတိုးအကျယ်, ip, - ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စု, N 12 ရက်အတွင်း = 21) ။ ပထမ၊ ၇၊ ၁၄၊ နှင့် ၂၁ ကြိမ်ထိုးပြီးနောက်၊ သတ္တဝါများကိုလှောင်အိမ်ထဲသို့ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခြေအနေများအတွက်အလျားလိုက်ရွေ့လျားတဲ့အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ် (Pan Lab မှ, စပိန်) ကတိုင်းတာခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ( Masur နှင့် dos Santos, 1988 နှင့် Coelhoso et al ။ , 2013), ဝယ်ယူများ၏ 21st နေ့ကမှာ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ကို2လူမျိုးကွဲအတွက် EtOH အုပ်စုတစ်စု၏တိရိစ္ဆာန်များကိုဖြန့်ဝေခွင့်ပြု: EtOH_High (ထိုဖြန့်ဝေ၏အထက်ပိုင်း 30% ကနေယူ) နှင့် EtOH_Low (ထို၏အောက်ပိုင်း 30% ကနေခေါ်ဆောင်သွား ဖြန့်ဖြူး) ။ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များသာ 60% ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤနည်းဗျူဟာ (ထိုအီသနောာင်းပါရာဒိုင်းအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသူတို့အားတူညီဖြစ်ပါသည် Masur နှင့် dos Santos, 1988, Souza-Formigoni et al ။ , 1999, Quadro et al ။ , 2002a, Quadro et al ။ , 2002b, Abrahão et al ။ , 2011, Abrahão et al ။ , 2012 နှင့် Coelhoso et al ။ , 2013).
စမ်းသပ်အုပ်စုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းကာလ၏သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှု ၂ ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (၁) တိရိစ္ဆာန်များအားဝယ်ယူသည့်အဆင့်သို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး ၁၈ နာရီကြာရုပ်သိမ်းပြီးနောက်နှင့် (၂) တိရိစ္ဆာန်များကိုဝယ်ယူခြင်းအဆင့်သို့တင်သွင်း။ ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သည်။ ဆုတ်ခွာ၏2ရက်အကြာမှာ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတွင်စမ်းသပ်မှုအုပ်စု (၃) ခု (ထိန်းချုပ်မှု၊ EtOH_High နှင့် EtOH_Low) ၂ ခုခွဲခြားထားသည် (၁၈ နာရီနှင့် ၅ ရက်ဆုတ်ခွာ) (N = အဖွဲ့ခွဲနှုန်း 6) ။ ဆုတ်ခွာကာလအတွင်းအဆိုပါယာယီအမှတ်အသားနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ၁၈ နာရီကြာဆုတ်ခွာပြီးနောက် FosB နှင့် DeltaFosB တို့၏ဖော်ပြချက်နှင့် (Lab မှယခင်လေ့လာချက်များအပေါ် အခြေခံ၍) ၅ ရက်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်၊ သော locomotor sensitization ပါရာဒိုင်းအတွင်းဆုတ်ခွာကာလနှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောအာရုံကြောဓာတု features တွေစုံစမ်းစစ်ဆေး Fallopa et al ။ , 2012 နှင့် Escosteguy-Neto et al ။ , 2012) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် locomotor sensitization နှင့် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီအတွက် locomotor sensitization ၏အမှတ်ကိုပုံသေနည်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ score = (၂၁ ရက်အတွင်း Locomotion - ပထမနေ့၌ Locomotion) * ၁၀၀ / Locomotion ပထမနေ့
2.3 ။ Immunohistochemistry
ပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်အချိန်ပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်များကို ketamine (75 mg / kg, ip) နှင့် xylazine (25 mg / kg, ip) ပါသည့်ကော့တေးဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာမေ့ဆေးပေးခဲ့သည်။ မျက်ကြည်လွှာတုံ့ပြန်မှုဆုံးရှုံးပြီးနောက်၎င်းတို့သည် ၁၀၀ မီလီမီတာဖော့စဖိတ်ကြားခံဖြေရှင်းချက် (၁.၁ မီလီမီတာ) [ဖော့စဖိတ်ဖူလုံသောဆား (PBS)] ဖြင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြည့်တင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၀၀ မီလီယံ 100% paraformaldehyde (PFA) ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဦး နှောက်ကို perfusion လုပ်ပြီးချက်ချင်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ PFA ထဲမှာ ၂၄ နာရီထားပြီးတော့ ၃၀% sucrose / PBS solution မှာ ၄၈ နာရီထားတယ်။ Serial coronal section (0.1 μm) ကိုခဲနေသော microtome ဖြင့် ဖြတ်၍ immunohistochemistry လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် free-floating staining အားဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ခဲနေသော anti-free solution တစ်ခုတွင်သိုထားခဲ့သည်။
immunohistochemistry အဘို့, avidin-biotin-immunoperoxidase ၏သမားရိုးကျ technique ကိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအားလုံး၏ ဦး နှောက်ကဏ္sectionsများကိုတူညီသောပြေးပွဲတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (၃%) ဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြိုတင်၍ ဆေးကြောပြီးလျှင် PBS နှင့်မိနစ် ၃၀ ကြာဆေးကြောသည်။ ထို့နောက်ခွဲခြားမှုမရှိသောတုံ့ပြန်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အပိုင်း ၃၀ ကိုမိနစ် ၃၀ အတွင်း PBS-BSA .3% ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် PBS-T solution (၃၀ မီလီဂရမ် PBS၊ ၃၀၀ μl Triton) (အပိုင်း ၃၀၀၀၊ Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA ။ no.cat AV15) သည်အပိုင်းအစများကိုအဓိကပodyိပစ္စည်းယုန်ယုန်ဆန့်ကျင်သော FosB / DeltaFosB နှင့်အတူညတွင်းချင်းခွဲစိတ်ခဲ့သည်။ X-30) ။ နောက်ပိုင်းတွင်အခန်းများအပူချိန်မှာအခန်းများ biotinylated ဆိတ်သငယ်ကို - ယုန်ဆန့်ကျင် IgG အလယ်တန်း antibody ကို (30: 5; Vector, Burlingame, CA, USA) တွင် 1 နာရီနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ထိုအပိုင်းများကို avidin-biotin ရှုပ်ထွေးသော (Vectastain ABC Standard kit; Vector, Burlingame, CA, USA) ဖြင့်မိနစ် ၉၀ ကြာကုသပြီးနောက်နီကယ်ပိုမိုပြင်းထန်သော diaminobenzidine တုံ့ပြန်မှုသို့တင်ပြခဲ့သည်။ လှေကားထစ်များအကြားအပိုင်းများကို PBS တွင်ဆေးပေးပြီးလှည့်ပတ်စက်ကိုလှည့်သည်။ ကဏ္gelများကို gelatin-coated slide များပေါ်တွင်ခြောက်သွေ့။ ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊
အောက်ပါ encephalic ဒေသများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်: prefrontal cortex [anterior cingulate cortex (Cg1), prelimbic cortex (PRL) နှင့် infralimbic cortex (IL)], မော်တာ cortex [မူလတန်း (M1) နှင့် (M2) အလယ်တန်း] dorsal striatum [dorsomedial striatum ( DmS) နှင့် dorsolateral striatum (DlS)], ventral striatum [နျူကလိယ core ကို (Acbco) နှင့် shell ကို (Acbsh), ventral pallidum (VP)] Cornus Ammong 1 နှင့်အသီးသီး3(CA1 နှင့် CA3) ၏, hippocampus [ပိရမစ်ကြီးအလွှာ accumbens granular dentate gyrus ၏အလွှာ (DG)], amygdala [basolateral နျူကလိယ (BlA), နှင့်ဗဟိုနျူကလိယ (CeA)], hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယ (VMH) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ [anterior (VTAA) နှင့် posterior (VTAP) ဝေမျှ] ( မြင် ပုံ။ ၁) ။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော Nikon Eclipse E200 အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုအပိုင်း ၂၀ မှပုံချဲ့စက်များဖြင့်ဖမ်းယူခဲ့သည်။ ပုံများကို FosB / DeltaFosB immunoreactivity ၏ posterior analysis အတွက် .tiff archive အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ immunoreactive ဆဲလ်များကို ImageJ software (NIH Image, Bethesda, MD, USA) ကို အသုံးပြု၍ ရေတွက်သည်။ Stereotaxic Mouse Brain Atlas အရဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီရဲ့ ဦး နှောက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။Franklin နှင့် Paxinos, 1997) ။ အဏုကြည့်ခြင်းဖြင့်ယူသော photomicrographies သည် 2.5 × 10 ကိုကိုယ်စားပြုသည်3 μm2 ၂၀ ×ချဲ့ခြင်းတွင် FosB / DeltaFosB အမည်တပ်ထားသောဆဲလ်အရေအတွက်ကို 20 × 2.5 နှုန်းဖြင့် immunostaining ဆဲလ်ပျမ်းမျှအဖြစ်ဖော်ပြသည်3 μm2။ EtOH အုပ်စုများမှရရှိသောတန်ဖိုးများကို Control တန်ဖိုးများအဖြစ်ပုံမှန်သတ်မှတ်ပြီး% အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ (ထိန်းချုပ်မှု = 100%) ။
ပုံ။ ၁ ။
ဦးနှောက်ဒေသသိထားကိုယ်စားပြုမှုနမူနာ။ နမူနာဒေသများညွှန်ပြကြွက်ဦးနှောက် Coronal အပိုင်းသိထားပုံဆွဲ (ထံမှအဆင်ပြေအောင် Franklin နှင့် Paxinos, 1997) ။ M1 = မူလမော်တာ cortex; M2 = အလယ်ဗဟို motor cortex, CG1 = anterior cingulate cortex, PrL = ပဏာမပုံ Cortex, IL = infralimbic cortex, Acbco = နျူကလိယ accumbens core, Acbsh = နျူကလိယ accumbens shell ကို, VP = ventral pallidum DmS = dorsomedial striatum, DlS = dorsolateral stri1 Cornus ကအမ္မုန် 1, CA3 = Cornus ကိုအမ္မုန် 3; DG = သွားဘက်ဆိုင်ရာ gyrus ၏ granular အလွှာ, BlA = amygdala ၏ basolateral နျူကလိယ, CeA = amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ, VmH = ventromedial hypothalamic နျူကလိယ, VTAA = ventral tegmental ofရိယာ၏ anterior အဘို့ကို, VTAP = ventral tegmental ofရိယာ၏ posterior သောအဘို့ကို။
2.4 ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ကန ဦး အနေဖြင့် Shapiro-Wilk သည် variable များအားလုံး၏ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရလဒ်များကို locomotor sensitization ၏5ကြိမ်အချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာများအတွက်တလမ်း ANOVA အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်: basal, နေ့ 1, နေ့ 7, နေ့ 14, နှင့် 21 ရက်။ အဆိုပါ histological ရလဒ်များကိုနှစ်လမ်း ANOVA အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည် အချက်များအဖြစ်: ဆုတ်ခွာ (18 ဇနှင့်5ရက်) ၏ကာလနှင့်စမ်းသပ်အုပ်စု (ထိန်းချုပ်မှု, EtOH_High နှင့် EtOH_Low) ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း nonparametric variable တွေကိုအချက်အလက်များ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် Z ကိုရမှတ်များသို့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Two- လမ်း ANOVA အတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ Newman က Keuls Post-hoc လိုအပ်သည့်အခါအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ FosB / DeltaFosB အပြုသဘောဆဲလ်များနှင့် locomotor sensitization ၏ရမှတ်များအကြားဖြစ်နိုင်သမျှဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှုသာစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ရှိရာအရေးပါများအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများကို ၅ ရက်ကြာရုပ်သိမ်းခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့် (ရလဒ်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ဤဆက်စပ်မှုများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော FosB / DeltaFosB တန်ဖိုးများသည်ဤသီးခြားထွက်ခွာသည့်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများကို ၅ ရက်ကြာရုပ်သိမ်းခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့် (ရလဒ်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ဤဆက်စပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် FosB / DeltaFosB တန်ဖိုးများသည်ဤသီးခြားထုတ်ယူသည့်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရေးပါမှုအဆင့်ကို 5% သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်p <0.05) ။
3.1 ။ Locomotor ာင်း
ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများအတွက် ANOVA [အုပ်စုအချက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိF(2,32) = ၆၈.၃၃၊ p <0.001], protocol ၏ကာလ၌ [F(4,128) = ၆၈.၃၃၊ p <0.001], သူတို့အကြားအပြန်အလှန် [F(8,128) = ၆၈.၃၃၊ p <0.001] ။ Basom locomotion တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ EtOH အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဝယ်ယူမှု၏ပထမနေ့တွင်ရွေ့လျားမှုတွင်အလားတူတိုးများလာသည် (p <0.01) ။ သို့သော် EtOH_High (သို့သော် EtOH_Low မဟုတ်) သည်ဝယ်ယူမှုအဆင့်တစ်လျှောက်လုံးရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှု၏တိုးတက်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည် (p <၀.၀၁၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် EtOH_Low အုပ်စုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ဆုံးဝယ်ယူမှုတွင်၊ p <0.01 ဝယ်ယူမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌၎င်း၏ရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်။ ) ( ပုံ။ ၁) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ (မူရင်းလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို corroborated Masur နှင့် dos Santos, 1988) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အစီရင်ခံစာ (ထံမှ Coelhoso et al ။ , 2013) အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းမှတင်သွင်း outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုရည်မှတ်။
EtOH_High တွင်နာတာရှည်ကုသမှုတစ်လျှောက်လုံးအီသနောသည်ရွေ့လျားမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်အားကောင်းလာစေရန်တိုးမြှင့်ပေးသည်၊ သို့သော် EtOH_Low အုပ်စုတွင်။ အဆိုပါဒေတာ SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် N = 12 ထိန်းချုပ်ရေး, EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများအတွက်။ ⁎⁎P <0.01, တူညီတဲ့ကာလမှာထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ။ ##P <0.01 EtOH_Low အုပ်စုနှင့်တူညီသောကာလမှာစပ်လျဉ်း။ ‡‡P <0.01 တူညီသောအုပ်စုအတွင်း Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်။ ။ ¥¥P <0.01 အပေါ် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်။ <1st တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုအတွင်းဝယ်ယူ၏နေ့။
3.2 ။ FosB / DeltaFosB စကားရပ်
FosB / DeltaFosB immunoreactivity ၏ဖော်ပြထားတာ photomicrographics တွင်ဖော်ပြပါရှိသည် ပုံ။ ၁ နှင့်ပုံမှန်တန်ဖိုးများမှာပြနေကြသည် ပုံ။ ၁, ပုံ။ ၁, ပုံ။ ၁ နှင့် ပုံ။ ၁။ ANOVA တွေ့မြင် non-ပုံမှန် FosB / DeltaFosB immunoreactivity ၏တန်ဖိုးများအပေါင်းတို့နှင့်အဆောက်အဦများ၏စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက် (ထို M1, M2, DmS, DlS, Acbco, Acbsh, VP နဲ့ VTA အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှာဖွေတွေ့ရှိ two-လမ်း စားပွဲတင် Suppl1 နှင့် ဇယား ၁အသီးသီး) ။ စာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုများကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြမှုပုံစံ ၄ မျိုးရှိသည်။ M1 နှင့် M2 တွင်တွေ့ရသောပထမတစ်ခုမှာအီသနောထုတ်ယူမှုပဉ္စမနေ့၌ EtOH_High အုပ်စုတွင်သာ EtOH_High တန်ဖိုးများကိုဆုတ်ခွာသည့် ၁၈ နာရီမှ EtOH_High တန်ဖိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက FosB / DeltaFosB ဖော်ပြမှုတွင်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 18 ရက်ထုတ်ယူသော EtOH_Low အုပ်စုများကိုကြည့်ပါ ပုံ။ ၁) ။ VTAA တွင်လေ့လာခဲ့သောဒုတိယပုံစံတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်သည် EtOH_Low အုပ်စုတွင်သာ5ရက်တာကာလတွင်အီသနောရုပ်သိမ်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ) (ကြည့်ပါ ပုံ။ ၁) ။ DmS, Acbco နှင့် Acbsh တို့တွင်လေ့လာခဲ့သောတတိယပုံစံတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်သည် EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်အီသနောရုပ်သိမ်းမှု ၅ ရက်အတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု (ကြည့်ပါ။ ) ထံမှကွဲပြား ပုံ။ ၁) ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် DlS နှင့် VP တွင်လေ့လာခဲ့သောစတုတ္ထပုံစံတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်သည် EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်အီသနောရုပ်သိမ်းမှု ၅ ရက်အတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည် (ထိုပမာဏသည်ရုပ်သိမ်းမှု ၁၈ နာရီမှသက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) တိုးတက်ခဲ့သည်။ EtOH_Low ထက် EtOH_High အုပ်စုနှင့် EtOH_Low အုပ်စုသည် Control အုပ်စုနှင့်ကွဲပြားသည်။ ပုံ။ ၁).
ချဲ့၏ 20 မှာ FosB / DeltaFosB immunoreactivity ၏ Illustrative photomicrography ။ DmS = dorsomedial striatum; DlS = dorsolateral striatum; Acbco = နျူကလိယ core ကို accumbens; Acbsh = နျူကလိယ shell ကို accumbens; VP = ventral pallidum; VTAa = ventral tegmental areaရိယာ၏ anterior သောအဘို့ကို။
၁၈ နာရီနှင့် EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများရှိ M18 နှင့် M5 ရှိထုတ်ယူသည့်ကာလ ၅ ရက်အတွင်း FosB / DeltaFosB ၏ဖော်ပြချက်။ ဒေတာများကို±± SEM အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ ထိန်းချုပ်အုပ်စုများ၏တန်ဖိုးများအရပုံမှန်ဒေတာကိုကိုယ်စားပြုသည် (dotted line - 1% အဖြစ်စဉ်းစားသည်) ။ မီးခိုးရောင်ဘား = အီသနောဆုတ်ခွာ၏2ဇ; အနက်ရောင်ဘား = အီသနောထုတ်ယူ 100 ရက်။ ** P <0.01 ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ## P <0.01, ဆုတ်ခွာ၏ 18 နာရီမှာ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ‡‡ P <0.01, တူညီတဲ့ကာလအတွင်း EtOH_Low အုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ။ M1 = မူလမော်တာ cortex, M2 = အလယ်တန်းမော်တာ cortex ။
၁၈ နာရီနှင့် VTA ရှိ EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများတွင် ၅ ရက်ဆုတ်ခွာရန် FosB / DeltaFosB ကိုဖော်ပြခြင်း။ ဒေတာများကို±± SEM အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ၏တန်ဖိုးများအရပုံမှန်ဒေတာကိုကိုယ်စားပြုသည် (dotted line - 18% အဖြစ်စဉ်းစားသည်) ။ မီးခိုးရောင်ဘား = အီသနောဆုတ်ခွာ၏5ဇ; အနက်ရောင်ဘား = အီသနောထုတ်ယူ 100 ရက်။ ** P <0.01 ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ## P ဆုတ်ခွာ၏ 0.01 ဇမှာ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်စပ်လျဉ်း <18 ။ VTA = ventral tegmental areaရိယာ။
၁၈ နာရီနှင့် EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများမှ Acbco, Acbsh နှင့် DmS ရှိဆိုင်းငံ့ခြင်းကာလ ၅ ရက်နှင့် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်။ ဒေတာများကို±± SEM အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ၏တန်ဖိုးများအရပုံမှန်ဒေတာကိုကိုယ်စားပြုသည် (dotted line - 18% အဖြစ်စဉ်းစားသည်) ။ မီးခိုးရောင်ဘား = အီသနောဆုတ်ခွာ၏5ဇ; အနက်ရောင်ဘား = အီသနောထုတ်ယူ 100 ရက်။ * P <0.05 ** P <0.01, ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ## P ဆုတ်ခွာ၏ 0.01 ဇမှာ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်စပ်လျဉ်း <18 ။ Acbco = နျူကလိယ core ကို accumbens, Acbsh = နျူကလိယ accumbens shell ကို, DmS = dorsomedial striatum ။
၁၈ နာရီနှင့် EtPH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများရှိ VP နှင့် DlS ရှိဆိုင်းငံ့ခြင်းကာလ ၅ ရက်နှင့် FosB / DeltaFosB ကိုဖော်ပြခြင်း။ ဒေတာများကို±± SEM အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ၏တန်ဖိုးများအရပုံမှန်ဒေတာကိုကိုယ်စားပြုသည် (dotted line - 18% အဖြစ်စဉ်းစားသည်) ။ မီးခိုးရောင်ဘား = အီသနောဆုတ်ခွာ၏5ဇ; အနက်ရောင်ဘား = အီသနောထုတ်ယူ 100 ရက်။ ** P <0.01 ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ # P <0.05 ## P ဆုတ်ခွာ၏ 0.01 ဇမှာ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်စပ်လျဉ်း <18 ။ ‡‡ P <0.01, တူညီတဲ့ကာလအတွင်း EtOH_Low အုပ်စုနှင့်ပတ်သက်။ ။ VP = ventral pallidum, DlS = dorsolateral striatum ။
ဇယား ၁ ။
FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပတ်သက်. Two-လမ်း ANOVA အတွက်ရရှိသောစာရင်းအင်း parameters တွေကို။
ကာလ * ကုသမှု
M1 F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.025 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.055 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.089
M2 F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.038 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.233 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.045
CG1 F(1,30) = 11.08 P = 0.002 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.398 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.050
PRL F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.007 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.197 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.081
IL F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.062 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.167 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.389
Acbco F(1,30) = 22.23 P <0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.089 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.008
Acbsh F(1,30) = 50.44 P <0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.023 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P <0.000
VP F(1,30) = 38.01 P <0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.013 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P <0.000
DmS F(1,30) = 28.89 P <0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.035 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.002
DlS F(1,30) = 13.58 P = 0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.011 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.017
CA1 F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.036 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.002 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.215
CA3 F(1,30) = 14.92 P = 0.001 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.102 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.034
DG F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.447 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.241 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.785
BlA F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.016 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.884 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.199
CeA F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.121 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.801 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.501
VmH F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.016 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.503 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.192
VTAA F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.004 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.035 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.087
VTAP F(1,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.021 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.184 F(2,30) = ၆၈.၃၃၊ P = 0.211
M1 = မူလမော်တာ cortex; M2 = အလယ်တန်းမော်တာ cortex, CG1 = anterior cingulate cortex, PrL = ပဏာမပုံ Cortex, IL = infralimbic cortex, Acbco = နျူကလိယ accumbens core, Acbsh = နျူကလိယ accumbens shell ကို, VP = ventral pallidum DmS = dorsomedial striatum, DlS = dorsolateral stri1 Cornus ကအမ္မုန် 1, CA3 = Cornus ကိုအမ္မုန် 3; DG = သွားဘက်ဆိုင်ရာ gyrus ၏ granular အလွှာ, BlA = amygdala ၏ basolateral နျူကလိယ, CeA = amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ, VmH = ventromedial hypothalamic နျူကလိယ, VTAA = ventral tegmental areaရိယာ၏ anterior အဘို့ကို; VTAP = အလယ်ပိုင်း tegmental areaရိယာ၏ posterior သောအဘို့ကို။
စားပွဲတင် options များ
FosB / DeltaFosB စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဆုတ်ခွာဖို့ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်နှင့်ထိတွေ့မှုအီသနောမှမဟုတ်, ကျနော်တို့ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းရမှတ်အကြားဆက်စပ်မှုဖျော်ဖြေနှင့် FosB / DeltaFosB, (ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထက်အရေးပါအတွက်ဆုတ်ခွာ၏ 5th နေ့၌ M1 ဆဲလ် immunolabelled M2, Acbco, Acbsh, DmS, DlS, VP, VTAA) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤအရေးပါမဆိုမသိသိသာသာဆက်စပ် (M1 ရှိကြ၏ - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.987156; M2 - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.196646; Acbco - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.799669; Acbsh - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.633991; DmS - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.463960; dlS - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.914182; VP - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.785443; VTAA - r2 = ၆၈.၃၃၊ p = 0.823630) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိရလဒ် FosB / DeltaFosB ၏တိုးလာစကားရပ်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းပါရာဒိုင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအကြံပြုဆုတ်ခွာဖို့ထက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု locomotor ာင်းအတွက်အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ locomotor ာင်းပါရာဒိုင်းများ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ထဲမှာမော်တာ cortex, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကောင်းစွာတည်တတ်၏ (Vanderschuren နှင့်ပီယပ်, 2010) ။ ထို့အပွငျ mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ (အတူတကွတိုးချဲ့ amygdala ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ, ဆုတ်ခွာကာလ၏အလယ်ပိုင်း neurobiological features တွေတစ်ခုဖြစ်တယ်Koob နှင့် Le Moal, 2005 နှင့် Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ locomotor ာင်းပါရာဒိုင်း၏ဆုတ်ခွာကာလစူးစမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဤကာလအတွင်းမော်တာ cortex, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် striatum အတွက် FosB / DeltaFosB စကားရပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့။
FosB cDNA သည် ၃၃၊ ၃၅ နှင့် ၃၇ kDa ပရိုတိန်းများဟူသောအသုံးအနှုန်းကို encode လုပ်သည်။ ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့မှုသည်ပြင်းထန်သော ၃၃ နှင့် ၃၅- နှင့် ၃၇ - kDa Fos ပရိုတိန်းဓာတ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်စူးရှသောတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် FosB အသုံးအနှုန်းသည် 33 kDa နှင့်ဆက်စပ်သည် (McClung et al ။ , 2004 နှင့် Nestler, 2008) ။ ဤပရိုတိန်းများအကြားနောက်ထပ်ထူးခြားသောခြားနားချက်ရှိသည် - ၃၅-၃၇ kDa ပရိုတင်းများသည်အလွန်တည်ငြိမ်သော isoforms ဖြစ်သည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသောကြောင့် DeltaFosB ဟုလည်းခေါ်သည့်ဤအညှောင့်ပုံစံများသည် ဦး နှောက်ထဲတွင်စုပြုံနေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၊ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစသည့်နာတာရှည်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့် ပြန်၍ အလွန်အမင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။Kelz နှင့် Nestler, 2000, Nestler et al ။ , 2001 နှင့် McClung et al ။ , 2004) ။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, DeltaFosB ကြာရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ၏ပုံစံများကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ differential FosB နှင့် DeltaFosB ဖော်ပြ mouse ကိုလိုင်းများကို အသုံးပြု. တစ်ကြော့လေ့လာမှု (FosB စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်များတိုးမြှင့်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကိုလည်း striatum အတွက် psychostimulant-သွေးဆောင် locomotor ထိခိုက်စေ DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းများအကြားဆက်စပ်မှု neutralizes ကြောင်းပြသOhnishi et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့်, ပရိုတိန်းနှစ်ခုလုံးသည်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောစမ်းသပ် protocol တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ မှတ်သားဖွယ်မှာအသုံးပြုသော FosB antibody သည် FosB နှင့် DeltaFosB နှစ်မျိုးလုံးအားအသိအမှတ်ပြုသည်။ FosB သည်စူးရှသောနှိုးဆွမှုပြီးနောက် ၆ နာရီအတွင်းအခြေခံအဆင့်သို့လျော့ကျသွားသည်။Nestler et al ။ , 2001) နှင့် DeltaFosB ထပ်ခါတလဲလဲလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့မှုပြီးနောက်စုဆောင်းကျနော်တို့ FosB စကားရပ်ကျော်အီသနောကုသမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေဘက်လိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်, ဝယ်ယူအဆင့်အပြီးတိရစ္ဆာန်များ 18 ဇယဇျပူဇျောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိကျသေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုလေ့လာမှုတွင် FosB / DeltaFosB ဟူသောဖော်ပြချက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းပါမည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောမူလပantibိပစ္စည်းများကိုသုံးသောသူများအပါအ ၀ င်အခြားလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် (Conversi et al ။ , 2008, လီ et al ။ , 2010, Flak et al ။ , 2012 နှင့် Garcia-Perez et al ။ , 2012) ။ အကျိုးဆက်အဖြစ်အဲဒီစမ်းသပ်န့်အသတ်မှတပါး, ငါတို့အာရုံခံ plasticity အတွက် DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
ဒါဟာကောင်းစွာ (နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းကဦးနှောက်၏အတော်ကြာဒေသများတွင် FosB / DeltaFosB စကားရပ်တိုးပွါးကြောင်းတည်တတ်၏Nestler et al ။ , 2001 နှင့် Perrotti et al ။ , 2008) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအီသနော sensitized မဟုတ်သလိုအီသနော Non- sensitized ကြွက်ဝယ်ယူအဆင့်ပြီးနောက် 18 ဇ FosB / DeltaFosB စကားရပ်နှင့်ပတ်သက်။ နာတာရှည်ဆားကုသကြွက်ကနေကွဲပြား။ ထို့အပွငျ FosB / DeltaFosB စကားရပ်နှင့် locomotor sensitization ၏ရမှတ်များအကြားမျှသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မတူကွဲပြားစမ်းသပ် protocol ကိုမှာတွေ့ရတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအားဖြင့်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အီသနောထိတွေ့မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်ပုလင်းလွတ်နှစ်ခုရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသောက်သုံးမှု ၁၅ ကြိမ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။လီ et al ။ , 2010၁၇ ရက်အတွင်း (၈ ရက်မှ ၁၂ ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှတစ်နေ့လျှင်တိရစ္ဆာန်များသည်အီသနောကိုစားသုံးသည်) (သို့) ၁၇ ရက်အတွင်းအာဟာရပြည့်ဝစွာအရည်အာဟာရပြည့်ဝသောအရည်ကိုဖြည့်တင်းပါ။Perrotti et al ။ , 2008) ။ စာရေးသူနာတာရှည်ကုသမှုကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်အခြားလေ့လာမှုသည်, protocol ကို (သာ4အီသနောထိတွေ့မှုအတွက်ပါဝင်သည်Ryabinin နှင့်ဝမ်, 1998) ။ ထို့ကြောင့်၊ အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုသော protocol များသည်ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသော protocol နှင့်လုံးဝကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှနေ့စဉ်အီသနောထိုးဆေးကိုနေ့စဉ်ကုသမှု ၂၁ ရက်ပါဝင်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေသော်လည်း psychostimulants များကသွေးဆောင် locomotor sensitization ၏ protocols များအပြီး FosB / DeltaFosB စကားရပ်တွင်တိုးတက်မှုကိုသတင်းပို့သည့် intraperitoneal ထိုးဆေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုများများစွာရှိသည် (Brenhouse နှင့်ကြယ်, 2006, Conversi et al ။ , 2008 နှင့် Vialou et al ။ , 2012) နှင့် opioids (Kaplan et al ။ , 2011) ။ သို့သော်ထိုလေ့လာမှုများအတွက် locomotor အကဲဆတ်ခြင်း protocol များ 21 မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုထက်အများကြီးလျော့နည်းပါဝင်, သူတို့အချို့အတွက်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလမ်းအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ protocol ကို (21 နေ့စဉ်အီသနောထိုးပါဝင်သောယခင်လေ့လာမှုများတှငျဖျောပွထားတူညီကုသမှုကိုအသုံးပြုMasur နှင့် dos Santos, 1988, Souza-Formigoni et al ။ , 1999, Quadro et al ။ , 2002a, Quadro et al ။ , 2002b, Abrahão et al ။ , 2011 နှင့် Abrahão et al ။ , 2012) ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB ထုတ်ဖော်စုဆောင်းခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်ပေမယ့်, ကလည်း (ventral နှင့် dorsal နှစ်ဦးစလုံး striatum အတွက် DeltaFosB mRNA သော induction မှသည်းခံစိတ်ကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်Larson et al ။ , 2010) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သပစ္စုပ္ပန် protocol ကိုအတွက်သင်ယူမှုအဆင့်ပိုကြီးတဲ့ကာလ psychostimulant နှင့် opioids အတှကျအသုံးပွုကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည်ကတည်းကဝယ်ယူအဆင့်၌အကြှနျုပျတို့၏စမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခြင်း, FosB / DeltaFosB သော induction နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးသည်းခံမှုကြောင့်ဖြစ်အံ့သောငှါတွေးဆ သည်အခြားလေ့လာမှုများ၌တည်၏။
နောက်ကောက်နှင့် Transgene ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာရေး FosB Mutant ကြွက်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော် locomotor ဆိုးကျိုးများနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုအဖြစ်ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု, မြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ Basal နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် DeltaFosB နှစ်ဦးစလုံး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး (ဒီ Mutant ကြွက်များတွင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါသည်Hiroi et al ။ , 1997) ။ ဆနျ့ကငျြ, DeltaFosB ပြပွဲ၏သွေးဆောင် overexpression နှင့်အတူ Transgene ကြွက် (ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်et al Muschamp ။ , 2012) ။ ဤရလဒ်သည် DeltaFosB နှင့်ကြိုးဖြစ်စဉ်ကိုအကြားနီးကပ်ဆက်စပ်မှုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေပေးအပ်။ ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအပြင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း (corticolimbic ဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စကားရပ်ကိုတိုးပွားစေPerrotti et al ။ , 2004) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ DeltaFosB overexpressing Transgene ကြွက် (ကြွက်များတွင် dysphoria နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများသွေးဆောင်သိ Kappa-opioid agonist ၏လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံများမှာet al Muschamp ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့် DeltaFosB သည်ဆုချီးမြှင့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အပြင်ဖြစ်ရပ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ယူမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဤအခြေအနေတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြမှုကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ FosB / DeltaFosB စကားရပ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိသောကြောင့်ဤရှုထောင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် FosB / DeltaFosB အသုံးအနှုန်းများကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအားငါးရက်မြောက်သောနေ့၌သာတွေ့ရှိရသည်။
ယခင်အုပ်စုပိုပြီးဖော်ပြပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာတချို့အဆောက်အဦများအတွက်, FosB / DeltaFosB တိုးသူတို့၏ပြင်းထန်မှုသည်နှင့်အညီ, ဤတိုးကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိနိုင်တယ်လို့အကြံပြု, EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုတစ်စုနှစ်ဦးစလုံးတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအယူအဆ FosB / DeltaFosB အများအပြားကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ကြွက်ပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာအသစ်အဆန်း preference ကိုနှင့်တကွ, ဆုတ်ခွာကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အပြုသဘောကိုကင်း preference ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု DeltaFosB စကားရပ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျဆုတ်ခွာကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု (corticolimbic အာရုံခံအတွက် DeltaFosB စကားရပ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် psychostimulants ဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးNikulina et al ။ , 2012) ။ ဒီတော့ DeltaFosB (အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့၏ dysregulation ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်Marttila et al ။ , 2007) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှနှစ်ဦးစလုံးခံနိုင်ရည် (striatum အတွက်ပိုမိုမြင့်မား DeltaFosB စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေတာVialou et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ EtOH_High အတွက် striatum အပေါ် FosB / DeltaFosB တိုးပွားလာကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ထိတွေ့မှုမှမြင့်မားလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဆွေးနွေး, အီသနော၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်တယ်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင် EtOH_Low အုပ်စုတွင်မြင်ကြ FosB / DeltaFosB တစ်ဦးထက်ပိုသောပြင်းထန်သောတိုးဒီမြင့်မားခုခံရှင်းပြတစ်အကျိုးဆက်အဖြစ်, နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ထိတွေ့မှု၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအသေးအဖွဲ, နှစ်ဦးစလုံး dysphoria နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုဖို့ sensitivity ကိုယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်နိုင် အုပ်စုတစု။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီဝိရောဓိတစ် neurochemical အခြေခံရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလတ်စားကျောရိုးအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏ GABAergic အာရုံခံ FosB overexpressing Transgene ကြွက် mu- နှင့် kappa- နှစ်ဦးစလုံး opioid receptors (အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်sim-Selley et al ။ , 2011), နှင့်ထို receptors အသီးသီး mesolimbic သေံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တားစီး (Manzanares et al ။ , 1991 နှင့် Devine et al ။ , 1993) ။ ထို့အပြင်ထိုဆဲလ်အမျိုးအစားစကားရပ်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်တိုးမြှင့် FosB / DeltaFosB ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အာရုံခံဖော်ပြ D1- သို့မဟုတ် D2- အတွက် DeltaFosB overexpressing ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ကြော့လေ့လာမှုအတွက် D1- (သို့သော်မ D2- အတွက်) တွင် neuron အတွက် DeltaFosB (ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းထင်ရှားGrueter et al ။ , 2013).
စိတ်ဝင်စားစရာကား motor cortex နှင့် ပတ်သက်၍ EtOH_High အုပ်စုတွင် FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်များမြင့်တက်လာသဖြင့် ၅ ရက်မြောက်ဆုတ်ခွာခြင်းကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ ၁၈ နာရီကြာဆုတ်ခွာမှုတိုးမြှင့်မှုမရှိခြင်းသည်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုအပြီးဤဒေသရှိ FosB / DeltaFosB ဖော်ပြချက်တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသည်းခံမှုယန္တရားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များတိရိစ္ဆာန်များသည်ဤကာလအတွင်းခြယ်လှယ်မခံခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းဆုတ်ခွာကာလအတွင်းမော်တာ cortex အတွက်တက်ကြွအာရုံကြောဓာတုအပြောင်းအလဲများရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်သည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပလပ်စတစ်သည် locomotor sensitization ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ ၀ င်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရက်ပေါင်းများစွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည့် hyperlocomotion ကိုဤနေရာတွင်မလေ့လာသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှယခင်လေ့လာမှုများအပါအ ၀ င်လေ့လာမှုများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်များ (သိသိသာသာနည်းခြင်းမရှိသော) သည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်ကာလပြီးနောက်အီသနောနှင့်စိန်ခေါ်သောအခါရွေ့လျားမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Masur နှင့် dos Santos, 1988, Souza-Formigoni et al ။ , 1999, Quadro et al ။ , 2002a, Quadro et al ။ , 2002b, Abrahão et al ။ , 2011, Abrahão et al ။ , 2012, Fallopa et al ။ , 2012 နှင့် Coelhoso et al ။ , 2013).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသာ EtOH_Low အဖွဲ့ ventral tegmental ဧရိယာ၏ anterior (သို့သော် posterior မဟုတ်) သောအဘို့ကိုတစ်ခုတိုးလာ FosB / DeltaFosB စကားရပ်ပြသကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဝေမျှကွဲပြားစီမံချက်များနှင့် neurochemical profile များကိုရှိသည်, အကျိုးကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုအများအပြားအချက်များ (အပေါ်မူတည်Ikemoto, 2007) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အီသနောကိုကြွက်များ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းသည်အနောက်ဘက်နှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း ventral tegmental ofရိယာ၏ ventral အဘို့နှင့်မဟုတ်ပါ (Rodd-Henricks et al ။ , 2000 နှင့် Rodd et al ။ , 2004) ။ ထို့ပြင် endocannabinoid သည့်စနစ်အဖြစ်ဂါဘမြို့သား-A, dopaminergic D1-D3 နှင့် serotoninergic 5HT3 receptors, (အပြုအမူရှာကြံအီသနောအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍLinsenbardt နှင့် Boehm, 2009, Rodd et al ။ , 2010, ဖရဲသီးနှင့် Boehm, 2011b နှင့် Hauser et al ။ , 2011) ။ သို့သော် ventral tegmental ဧရိယာ၏ anterior တစျပိုငျးကိုအတွက်ဂါဘမြို့သား-B က (ထိုကြိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရေးကြီးသည်Moore နဲ့ Boehm, 2009) နှင့်လှုံ့ဆော် locomotor သက်ရောက်မှု (Boehm et al ။ , 2002) အီသနော၏။ ထို့ပြင် anterior တစျပိုငျးကိုအတွက် cholinergic နီကိုတင်း receptors (အီသနောသဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့ accumbal dopamine အဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Ericson et al ။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့်, မသက်ဆိုင်သည်ဤဝေမျှ၏ကွဲပြားပရိုဖိုင်းက anterior ဝေမျှအတွက် EtOH_Low အုပ်စုတွင်မြင်ကြပြောင်းလဲမှုအကျိုးဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကင်းသော်လည်းမနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအထူးသတဲ့ gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) ဆဲလ်လူဦးရေ (ထဲတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၌ DeltaFosB တိုးပွါးPerrotti et al ။ , 2005) ။ ဤအချက်ကို, EtOH_High ကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ကြုံတွေ့ဆုတ်ခွာတစ်လျှောက်လုံးဤကာလအတွက်မသက်ဆိုင်သည့် putative မြင့်မားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကို FosB / DeltaFosB ၏ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ထို့အပွငျ, ဒီဒေတာကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, EtOH_Low အတွက်ဆုတ်ခွာတစ်လျှောက်လုံး FosB / DeltaFosB စကားရပ်တို့၏စီးပွါးတစ်ဦးသပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်သောအယူအဆ corroborates ။
မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု (ထူးခြားတဲ့များမှာFlagel et al ။ , 2009, ဂျော့ခ်ျနဲ့ Koob, 2010 နှင့် Swendsen နှင့် Le Moal, 2011) ။ အကျိုးဆက်ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆိုင်ရာ neurobiological features တွေလေ့လာဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ အမူအကျင့်ာင်းလေ့မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiological features တွေစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အသုံးပြုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ model ၏အခြေခံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုသူတို့ရဲ့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုတလျှောက်တိုးမြှင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့ဝယ်ယူ, locomotor ာင်းတည်မြဲရှည်လျားသည်နှင့် mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် morphological နှင့် neurochemical အပြောင်းအလဲများနှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မော်တာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြား encephalic အရေးပါ (နှင့်တိုက်ရိုက်ယာယီစပ်လျဉ်းဖြစ်ပါသည်Robinson နဲ့ Kolb, 1999 နှင့် Vanderschuren နှင့်ပီယပ်, 2010) ။ တို့ကကောက်ယူတစ်ဦးကရှေ့ဆောင်လေ့လာမှု Masur နှင့် dos Santos (1988) အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းနှင့် ပတ်သက်. outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်တွေမှာကြီးမားတဲ့အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိကွောငျးသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုအခါ မှစ. အခြားအလေ့လာမှုများအပေါ် (က, dopaminergic မှဆက်စပ်အဓိကအားဖြင့်သူတို့အား neurochemical features နဲ့အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအကြားအရေးပါသောဆက်စပ်မှုသရုပ်ပြပါပြီAbrahão et al ။ , 2011, Abrahão et al ။ , 2012 နှင့် Souza-Formigoni et al ။ , 1999) နှင့် glutamatergic စနစ်များ (Quadro et al ။ , 2002a နှင့် Quadro et al ။ , 2002b) ။ ထို့ပြင်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေယခင်လေ့လာမှုထိခိုက် (သို့သော်မရမဟုတ်သော-sensitive) ကြွက် (ရုပ်သိမ်းရေးကာလအတွင်း cannabinoid အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (CB1R) ရက်နေ့တွင်ထူးခြားတဲ့တိုးပေးအပ်ကြောင်းပြသCoelhoso et al ။ , 2013) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ EtOH_High နှင့် EtOH_Low အုပ်စုများအကြားဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အနှစ်ချုပ်ရန်, အီသနောသွေးဆောင် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူအဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆုတ်ခွာကာလအတွင်းကွဲပြားအာရုံခံ plasticity ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့် Non-sensitized ကြွက်များတွင်တွေ့ရှိ FosB / DeltaFosB စကားရပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြစ်ကောင်းကြောင့်မူးယစ်သွေးဆောင် FosB / DeltaFosB ကူးယူ၏သည်းခံစိတ်ရန်, ဆုတ်ခွာကာလမှထက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုပိုမိုဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အောက်ပါဤဆောင်းပါးကိုနှင့် ပတ်သက်. ဖြည့်စွက်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။
စားပွဲတင် Suppl1 ။
စမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက် FosB / DeltaFosB ထုတ်ဖော် non-ပုံမှန်စကားရပ်။
DOC file တွေနှင့်အတူကိုကူညီပါ
RFP နှင့် CCC မှအသီးသီး Cape နှင့် FAPESP မှမာစတာမိတ်သဟာယဖွဲ့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီလောက်သေးအောင်လုပ်နိုင်တာ, LEM, DXS နှင့် JGSJ နေဖြင့်ခွင့်ပြုထားပါသည် FAPESP နှင့် CNPq.
Abrahão et al ။ , 2011
KP Abrahão, IM Quadro, ML Souza-Formigoni
နျူကလိယ dopamine D1 receptors အီသနော-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးထိနျးညှိ accumbens
int J ကို Neuropsychopharmacol, 14 (2011), စစ။ 175-185
အပြည့်အဝစာသား CrossRef မှတဆင့်
Hiroi et al ။ , 1997
N. Hiroi, JR ဘရောင်း, CN မိုးသီး, အိပ်ချ်ရဲ, ME Greenberg, EJ Nestler
FosB Mutant ကြွက်များ - Fos နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုတင်းများကိုနာတာရှည်ကိုကင်းများနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုကင်း၏စိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသက်ရောက်မှုများဆုံးရှုံးခြင်း။
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 94 (1997), စစ။ 10397-10402
Hauser et al ။ , 2011
SR Hauser, ZM Ding, ခ Getachew, je Toalston, SM Oster, WJ McBride, et al ။
အဆိုပါ posterior ventral tegmental ဧရိယာအရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူ mediates
J ကို Pharmacol Exp Ther, 336 (2011), စစ။ 857-865
Harris က et al ။ , 2007
GC Harris က, အမ်ဒေါ့မွန်, အမ် Wimmer, SD က Mague, G. အ Aston-ဂျုံးစ်
အတင်းအကျပ်ကင်း abstinence စဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် FosB ၏ဓာတ်လှေကားဆုလာဘ် function ကိုအတွက်မတူကွဲပြားအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပတျသကျ
neuroscience, 147 (2007), စစ။ 583-591
PDF ဖိုင် (1633 K)
Grueter et al ။ , 2013
BA ဘွဲ့ Grueter, AJ Robison, RL Neve, EJ Nestler, RC Malenka
ΔFosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို accumbens modulates
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 110 (2013), စစ။ 1923-1928
ဂျော့ခ်ျနဲ့ Koob, 2010
O. ဂျော့ခ်ျ, gf Koob
prefrontal cortex function ကိုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေမူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
neuroscience Biobehav ဗြာ, 35 (2010), စစ။ 232-247
PDF ဖိုင် (809 K)
Garcia-Perez et al ။ , 2012
ဃ Garcia-Perez, ML Laorden, သင်္ဘော MV Milan, C. Núñez
ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်အတွက်နာတာရှည် opiate ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် FosB / ΔFosBထုတ်ဖော် Glucocorticoids စည်းမျဉ်း
PLoS တစ်ခုမှာ,7(2012), p ။ e50264
Franklin နှင့် Paxinos, 1997
KB Franklin, G. အ Paxinos
stereotaxic သြဒီနိတ်အတွက် mouse ကိုဦးနှောက်
ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, San Diego မှ (1997)
Flak et al ။ , 2012
ဖြစ်မှု Flak, ကို MB ရှောလမုန်, R. Jankord ဥပမာ Krause, JP Herman
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-activated ဒေသများသတ်မှတ်ခြင်းကြွက်ဦးနှောက်အတွက်အလားအလာစုဆောင်း circuit ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
EUR J ကို neuroscience, 36 (2012), စစ။ 2547-2555
Flagel et al ။ , 2009
SB Flagel, အိပ်ချ် Akil, TE ရော်ဘင်ဆင်
မက်လုံးပေး salience မှဆုချ-related တွေကိုများ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: စွဲဘို့ဂယက်ရိုက်
Neuropharmacology, 56 (ပျော့ပျောင်း။ 1) (2009), စစ။ 139-148
PDF ဖိုင် (657 K)
Fallopa et al ။ , 2012
P. Fallopa, JC Escosteguy-Neto, P. Varela, TN Carvalho, Am Tabosa, JG ဆန်းတို့စဂျူနီယာ
Electroacupuncture ကြွက်တွေမှာအီသနော-သွေးဆောင် locomotor ထိခိုက်စေနောက်ဆက်တွဲအခွင့်အရေးစကားရပ်နောက်ကြောင်းပြန်
int J ကို Neuropsychopharmacol, 15 (2012), စစ။ 1121-1133
Escosteguy-Neto et al ။ , 2012
JC Escosteguy-Neto, P. Fallopa, P. Varela, R. Filev, အေ Tabosa, JG ဆန်းတို့စ-ဂျူနီယာ
Electroacupuncture ကြွက်တွေမှာအီသနောဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် CB1 upregulation ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်
Neurochem Int, 61 (2012), စစ။ 277-285
PDF ဖိုင် (942 K)
Ericson et al ။ , 2008
အမ် Ericson, အီးLöf, R. Stomberg, P. Châu, ခSöderpalm
နီကိုတင်း acetylcholine အဆိုပါ anterior အတွက် receptors, ဒါပေမယ့်မရ posterior, ventral tegmental ဧရိယာ accumbal dopamine အဆင့်ဆင့်၏အီသနော-သွေးဆောင်မြင့်ဖျန်ဖြေ
J ကို Pharmacol Exp Ther, 326 (2008), စစ။ 76-82
Devine et al ။ , 1993
DP Devine, P. Leone, RA ပညာရှိ
Mesolimbic dopamine neurotransmission mu-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်တိုးပွါး
EUR J ကို Pharmacol, 243 (1993), စစ။ 55-64
PDF ဖိုင် (986 K)
Conversi et al ။ , 2008
ဃ Conversi, အေ Bonito-Oliva, C. Orsini, V. Colelli, အက်စ် Cabib
ventro-medial caudate အတွက် DeltaFosB စုဆောင်းခြင်းထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သော induction သော်လည်းမအပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအခြေခံ
EUR J ကို neuroscience, 27 (2008), စစ။ 191-201
Coelhoso et al ။ , 2013
CC ကို Coelhoso, DS Engelke, R. Filev, DX Silveira, LE Mello, JG ဆန်းတို့စဂျူနီယာ
အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းပါရာဒိုင်းတင်သွင်း outbred ကြွက်တွေမှာ cannabinoid အဲဒီ receptor စကားရပ်များတွင်ယာယီနှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
အရက် Clin Exp Res, 37 (2013), စစ။ 1516-1526
Brenhouse နှင့်ကြယ်, 2006
HC Brenhouse, JR ကြယ်
က c-Fos နှင့် deltaFosB စကားရပ် differential သည့်နျူကလိယ၏ကွဲပြားငျဒသေထဲမှာပြောင်းလဲနေကြသည်ကိုကင်း-sensitized ကြွက်များတွင် shell ကို accumbens
neuroscience, 137 (2006), စစ။ 773-780
PDF ဖိုင် (470 K)
Boehm et al ။ , 2002
SL Boehm II ကို, MM Piercy, HC Bergstrom, တီဂျေ Phillips က
Ventral tegmental ဧရိယာဒေသဂါဘမြို့သား (ခ) ကြွက်များတွင်အီသနော-stimulation လှုပ်ရှားမှုအဲဒီ receptor မော်ဂျူအုပ်ချုပ်
neuroscience, 115 (2002), စစ။ 185-200
PDF ဖိုင် (872 K)
Berton et al ။ , 2007
O. Berton, HE Covington III ကို, K. Ebner, မိုင် Tsankova, TL Carl, P. Ulery, et al ။
စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် periaqueductal Grey ကအတွက် deltaFosB ၏ induction တက်ကြွဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်
အာရုံခံဆဲလျ, 55 (2007), စစ။ 289-300
PDF ဖိုင် (1308 K)
Abrahão et al ။ , 2012
KP Abrahão, IM Quadro, AL Andrade, ML Souza-Formigoni
Accumbal dopamine D2 အဲဒီ receptor function ကိုအီသနောအမူအကျင့်ာင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
Neuropharmacology, 62 (2012), စစ။ 882-889
PDF ဖိုင် (617 K)
Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေးသော
ဦးနှောက် Res ဗြာ, 56 (2007), စစ။ 27-78
PDF ဖိုင် (10248 K)
Nestler et al ။ , 2001
EJ Nestler, အမ် Barrot, DW ကိုယ်ပိုင်
DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch ကို
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 98 (2001), စစ။ 11042-11046
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ
ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ, 363 (2008), စစ။ 3245-3255
et al Muschamp ။ , 2012
JW Muschamp, CL Nemeth, AJ Robison, EJ Nestler, WA Carlezon ဂျူနီယာ
အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ၏လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းΔFosBကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ် U50488
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု, 71 (2012), စစ။ 44-50
PDF ဖိုင် (1469 K)
Moore နဲ့ Boehm, 2009
EM Moore က, SL Boehm II ကို
site ကို - တိကျတဲ့ microinjection ၏ anterior ventral tegmental intoရိယာသို့ baclofen အထီး C57BL /6J ကိုကြွက်များတွင်မူးရူးကဲ့သို့အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်
ပြုမူနေ neuroscience, 123 (2009), စစ။ 555-563
ဖရဲသီးနှင့် Boehm, 2011b
LC ဖရဲသီး, SL Boehm II ကို
C15BL / 4513 J အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မူးရူးကဲ့သို့အီသနောစားသုံးမှု၏ Ro57-6- သွေးဆောင် attenuation အဆိုပါ posterior အတွက်မဟုတ်ဘဲ anterior, ventral tegmental areaရိယာထဲမှာ GABAA receptors ဖျန်ဖြေ
ပြုမူနေဦးနှောက် Res, 220 (2011), စစ။ 230-237
PDF ဖိုင် (939 K)
ဖရဲသီးနှင့် Boehm, 2011a
LC ဖရဲသီး, SL Boehm
အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်အရက်မှ locomotor sensitization ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် genotype ၏အခန်းက္ပ: DBA /2J နှင့် C57BL /6J ကို inbred mouse ကိုမျိုးကွဲနှိုင်းယှဉ်
အရက် Clin Exp Res, 35 (2011), စစ။ 1351-1360
McClung et al ။ , 2004
, CA McClung, PG Ulery, LI Perrotti, V. Zachary, O. Berton, EJ Nestler
DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch ကို
ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res, 132 (2004), စစ။ 146-154
PDF ဖိုင် (305 K)
Masur နှင့် dos Santos, 1988
ဂျေ Masur, HM dos Santos
ကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor activation ၏တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ
Psychopharmacology (Berl), 96 (1988), စစ။ 547-550
Marttila et al ။ , 2007
K. Marttila, T. Petteri Piepponen, K. Kiianmaa, အယ်လ် Ahtee
ကိုကင်းနှင့်အတူထပ်တလဲလဲကုသအရက်သေစာ- သာ. နှစ်သက် AA ကိုကြွက်များနှင့်အရက်-ရှောင်ရှား ANA ကကြွက်များတွင် Accumbal FosB / DeltaFosB immunoreactivity နှင့်အခြေအနေများကိုရာအရပျ preference ကို
ဦးနှောက် Res, 1160 (2007), စစ။ 82-90
PDF ဖိုင် (622 K)
Manzanares et al ။ , 1991
ဂျေ Manzanares, KJ Lookingland, Ke Moore က
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopaminergic အာရုံခံ၏ Kappa opioid အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း
J ကို Pharmacol Exp Ther, 256 (1991), စစ။ 500-505
Linsenbardt နှင့် Boehm, 2009
DN Linsenbardt, SL Boehm II ကို
အဆိုပါ endocannabinoid စနစ်၏ Agonism အထီး C57BL /6J ကိုကြွက်များတွင်မူးရူးကဲ့သို့အရက်သေစာစားသုံး modulates: အ posterior ventral tegmental areaရိယာ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
neuroscience, 164 (2009), စစ။ 424-434
PDF ဖိုင် (1506 K)
လီ et al ။ , 2010
ဂျေလီ, Y. Cheng, ဒဗလျူ Bian, X တို့မှာလျူ, C. Zhang က, JH ရဲ
မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုအားဖြင့် FosB / ΔFosB၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့သော induction: naltrexone ၏ဆိုးကျိုးများ
အရက် Clin Exp Res, 34 (2010), စစ။ 1742-1750
Larson et al ။ , 2010
Alibhai IN eb Larson, အက်ဖ် Akkentli, အက်စ် Edwards က, DL ဂရေဟမ်, DL Simmons, et al ။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းΔFosB, FosB နှင့် cFos ၏ Striatal စည်းမျဉ်း
J ကို Neurochem, 115 (2010), စစ။ 112-122
Koob နှင့် Volkow, 2010
Neuropsychopharmacology, 35 (2010), စစ။ 217-238
Koob နှင့် Le Moal, 2005
gf Koob, အမ်က Le Moal
ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ 'မှောင်မိုက်ဘက်' '၏ plasticity
နတ် neuroscience, 8 (2005), စစ။ 1442-1444
Koob နှင့် Le Moal, 2008
စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်က
Annu ဗြာ Psychol, 59 (2008), စစ။ 29-53
Kelz နှင့် Nestler, 2000
ကို MB Kelz, EJ Nestler
DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြော plasticity အခြေခံတဲ့မော်လီကျူး switch ကို
Curr Opin Neurol, 13 (2000), စစ။ 715-720
Kaste et al ။ , 2009
K. Kaste, T. Kivinummi, TP Piepponen, K. Kiianmaa, အယ်လ် Ahtee
1 ။ အရက်- သာ. နှစ်သက် AA ကို၏ dopaminergic ဦးနှောက်ဒေသများနှင့် alchohol-ရှောင်ရှား ANA ကကြွက်များတွင် Basal အတွက်ကွာခြားချက်များနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် FosB / DeltaFosB နှင့် pCREB immunoreactivities
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ, 92 (2009), စစ။ 655-662
PDF ဖိုင် (592 K)
Kaplan et al ။ , 2011
GB ကို Kaplan, ka Leite-မောရစ်, ဒဗလျူဝါသနာရှင်, AJ လူငယ်တို့, MD Guy
Opiate ာင်း prefrontal cortical, striatal နှင့် amygdala ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB / ΔFosBစကားရပ် induces
PLoS တစ်ခုမှာ,6(2011), p ။ e23574
Nikulina et al ။ , 2012
EM Nikulina, MJ Lacagnina, အက်စ် Fanous, ဂျေဝမ်, RP Hammer ဂျူနီယာ
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု mesocorticolimbic ΔFosB / BDNF Co-expression ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ corticotegmental အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်: psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက်ဆိုလို
neuroscience, 212 (2012), စစ။ 38-48
PDF ဖိုင် (1552 K)
Vialou et al ။ , 2012
V. Vialou, ဂျေ Feng တို့, AJ Robison, SM Ku, ဃဖာဂူဆန်, KN Scobie, et al ။
သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်နှင့်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံးΔFosB၏ကင်းသော induction ဘို့လိုအပ်သည်
J ကို neuroscience, 32 (2012), စစ။ 7577-7584
Vanderschuren နှင့်ပီယပ်, 2010
LJ Vanderschuren, RC ပီယပ်
Curr ထိပ်တန်းပြုမူနေ neuroscience,3(2010), စစ။ 179-195
Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000
LJ Vanderschuren, PW Kalivas
အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောသုံးသပ်ချက်ကို
Psychopharmacology (Berl), 151 (2000), စစ။ 99-120
Swendsen နှင့် Le Moal, 2011
ဂျေ Swendsen, အမ်က Le Moal
အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ, 1216 (2011), စစ။ 73-85
Souza-Formigoni et al ။ , 1999
ML Souza-Formigoni, EM De Lucca, DC ကHipólide, SC Enns, MG Oliveira, ဖြစ်မှု Nobrega
အီသနောရဲ့လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့ binding ဦးနှောက် D2 အဲဒီ receptor အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောတိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
Psychopharmacology, 146 (1999), စစ။ 262-267
Solecki et al ။ , 2008
ဒဗလျူ Solecki, T. Krowka, ဂျေ Kubik, အယ်လ် Kaczmarek, R. Przewlocki
မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်များနှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအတွက် fosB ၏အခန်းက္ပ
ပြုမူနေဦးနှောက် Res, 190 (2008), စစ။ 212-217
PDF ဖိုင် (328 K)
sim-Selley et al ။ , 2011
LJ Sim-Selley, အမတ် Cassidy, အေ Sparta, V. Zachary, EJ Nestler, DE Selley
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြအပေါ်ΔFosB overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
Neuropharmacology, 61 (2011), စစ။ 1470-1476
PDF ဖိုင် (446 K)
Ryabinin နှင့်ဝမ်, 1998
AE Ryabinin, YM ဝမ်
ထပ်ခါတလဲလဲအရက်စီမံခန့်ခွဲမှုကွဲပြားခြားနား DBA /2J ကိုကြွက်များတွင် c-Fos နှင့် FosB ပရိုတိန်း immunoreactivity သက်ရောက်သည်
အရက် Clin Exp Res, 22 (1998), စစ။ 1646-1654
Rodd-Henricks et al ။ , 2000
ZA Rodd-Henricks, DL McKinzie, RS Crile, JM Murphy, WJ McBride
အမျိုးသမီး Wistar ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအီသနောဒ intracranial Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော
Psychopharmacology (Berl), 149 (2000), စစ။ 217-224
Rodd et al ။ , 2010
ZA Rodd, RL ဘဲလ်, SM Oster, je Toalston, တီဂျေ Pommer, WJ McBride, et al ။
အဆိုပါ posterior ventral tegmental ဧရိယာ၌ serotonin-3 receptors အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်၏အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းညှိ
အရက်, 44 (2010), စစ။ 245-255
PDF ဖိုင် (604 K)
Rodd et al ။ , 2004
ZA Rodd, RI က Melendez, RL ဘဲလ်, ka Kuc, Y. Zhang က, JM Murphy က, et al ။
dopamine အာရုံခံ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား: အထီး Wistar ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအီသနော၏ Intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေး
J ကို neuroscience, 24 (2004), စစ။ 1050-1057
Robinson နဲ့ Kolb, 1999
TE ရော်ဘင်ဆင်, ခ Kolb
စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ ALTER
EUR J ကို neuroscience, 11 (1999), စစ။ 1598-1604
Quadro et al ။ , 2002b
IM Quadro, ဖြစ်မှုNóbrega, DC က Hipolide, EM က de Lucca, ML Souza-Formigoni
အီသနောာင်းမှ differential propensity mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် receptors သို့မဟုတ် dopamine ပို့ဆောင်ရေး D1 မှပြောင်းလဲစည်းနှောင်တွေနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ
Addic Biol,7(2002), စစ။ 291-299
Quadro et al ။ , 2002a
IM Quadro, DC ကHipólide, R. Frussa Filho, EM De Lucca, ဖြစ်မှုNóbrega, ML Souza-Fomigoni
အီသနောာင်းမှခုခံသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် binding တိုးလာ NMDA အဲဒီ receptor နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
EUR J ကို Pharmacol, 442 (2002), စစ။ 55-61
PDF ဖိုင် (128 K)
Phillips က et al ။ , 1997
တီဂျေ Phillips က, AJ Roberts သည်, CN Lessov
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ, 57 (1997), စစ။ 487-493
PDF ဖိုင် (186 K)
Perrotti et al ။ , 2008
LI Perrotti, RR Weaver, ခ Robison, ဒဗလျူ Renthal, ဗြဲဝင်္, အက်စ် Yazdani, et al ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ
synapses, 62 (2008), စစ။ 358-369
Perrotti et al ။ , 2004
LI Perrotti, Y. Hadeishi, PG Ulery, အမ် Barrot, အယ်လ် Monteggia, RS Duman, et al ။
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction
J ကို neuroscience, 24 (2004), စစ။ 10594-10602
Perrotti et al ။ , 2005
LI Perrotti,, CA Bolaños, KH Choi, SJ Russo, အက်စ် Edwards က, PG Ulery, et al ။
DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း
EUR J ကို neuroscience, 21 (2005), စစ။ 2817-2824
Ohnishi et al ။ , 2011
yn Ohnishi, YH Ohnishi, အမ် Hokama, အိပ်ချ် Nomaru, K. Yamazaki, Y. Tominaga, et al ။
FosB စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်များတိုးမြှင့်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်နှင့်ΔFosBအားဖြင့် locomotor ာင်း antagonizes
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု, 70 (2011), စစ။ 487-495
PDF ဖိုင် (2016 K)
Vialou et al ။ , 2010
V. Vialou, AJ Robison, QC Laplant, HE Covington III ကို, DM Dietz, yn Ohnishi, et al ။
ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates
နတ် neuroscience, 13 (2010), စစ။ 745-752
Zachary et al ။ , 2006
Zachary,, CA Bolanos, DE Selley, ဃ Theobald, အမတ် Cassidy, ကို MB Kelz, V. et al ။
မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ
နတ် neuroscience,9(2006), စစ။ 205-211
စာရေးသူ - Rua Cesário Mota Jr၊ ၆၁ နှစ်၊ ၁၂ နှစ် Andar၊ São Paulo, SP 61-12, ဘရာဇီး။ Tel./fax: + 01221 020 55
မူပိုင်ခွင့်© 2013 Elsevier Inc က